Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:6aad | FooreNews
Home Aragtida Dadweynaha Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:6aad
Maxaad Kala Socotaa Qisadii Jacayl Ee Ku Dhacday Fannaanadda Caanka Ah Ee Binti Cumar Gacal?- Q:6aad
FoorenewsNov 23, 2017Aragtida Dadweynaha, Barnaamijo, Sheekooyin, wararka0
Kadib meel gaar ah oo cidlo ah ayaan iska fadhiistay aniga oo dhabanka iyo gacanta isku haya oo dhulka ku foorara. Aadbaan u walaacsanaa oo waxa iga muuqatay sida aan u niyad jabsanahay. Waxa goobtii aan fadhiyay isa soo kay dul taagay Abwaanka caanka ah ee aad wada taqaanaan waa Barre Maxamed Fiidow. Abwaanku waxa uu I waydiiyey waxa igu dhacay waxaanu yidhi Binti maxaa kugu dhacay ee aad madaxa iyo gacanta isku saartay waxaanan ku idhi iga aamus Barroow waxbaa meesha iga raacee. Inta uu yaabay oo si dareen leh ii soo eegay ayuu igu yidhi meeshee, maxaa meesha kaa raacay isaga oo sii tiigsanaya kursi meel halkaasa yaallay kadibna soo qaatay oo I soo ag fadhiistay. Waxaan ku idhi waar iska aamus waxba ma ogide. Barroow waxaan u tagay ninkii aan ku sii ordayay oo naag kale la jooga. “Naag La Jooga aa!!!!” inta uu yaabay ayuu sidaa yidhi. Waxaan ku idhi Barroow ayaan darro ayaa igu dhacday ninkaasi waa uu I xumeeyey sidii aad ogayd ee aan u jeclaa ee aan ugu soo ordayay ayaan afka uga galay isaga oo naag kale la joogto gurigiisii!!.
Sawirka Abwaan Barre
Markaa aan Abwaan Barre Maxamed Fiidow u sheegayo qisada iga qabsatay xalay ninkii aan la ballansanaa waan ooyayaa oo ilmo ayaa iga socota, abwaankuna wuu arkayaa sida xaaladdaydu tahay iyo ilmada dhabankayga saaran. Markaa ninkan aannu sheekaysan jirnay ee aan jeclaa waxa aan la socdaa muddo laba sano ah. Waxaan Abwaanka u sheegay in sheekadayadu socotay muddo laba sano ah xalayna uu sidaa xun yeelay. Abwaan Barre Maxamed Fiidow waxa uu igu yidhi isug hadda Bintiyeey. Halkii ayaan anna iska sii kambadhuudhay oo aan sugayay aniga oo ilmadu iga da’ayso. Kadib Abwaanku waa uu kacay waxaanu soo qaatay qalin iyo buug. Waan gartay markaasi in uu wax ka odhanayo qisadaydan xumaatay iyo walaacan igu dhacay.
Abwaan Barre waxa uu isla daqiiqaddii halkii agtayda ee aan fadhiyay ku sameeyey heestan caanka ah ee LUGGOOYO dad badanina u yaqaaniin Axdi. Isla isaga ayaa laxanka saaray oo heesta midhaheeda markiiba ku ladhay laxanka. Annaga oo heestii isku toostoosinayna oo uu ii akhriyayo iyada oo macal laxankeedii wadata ayuu waxa isla goobtii noogu yimid oo iskaaya soo dul taagay Fannaanka weyn iyo Muusishanka caanka ah Daa’uud Cali Masxaf. Daa’uud sida aad u taqaanaan waa Fannaan heesaa ah, sidoo kalena laxamada ugu macaan sameeya muusiggana aad ugu wanaagsan. Daa’uud heestii buu nala eegay waxaanu yidhi wallaahi heeskani waa hees aad u fiican. Isla markiiba heestii baan xafiday, muddo kooban oo dhawr saacadood kadib ahna waaban qaaday oo aan ku luuqeeyey. Kadib waa la iga duubay. Gelinkii dambe ayaan heeskii oo duuban qaaday oo aan u geeyey ninkii aannu xidhiidhka lahayn ee xalay waxa aan idiinka soo sheekeeyey igu sameeyey. Isagiibaan farta ka saaray heestii oo aan ku idhi waar dhagayso oo aniga ammaan I sii mar dambena ha I soo hadal qaadin.
Previous PostWalaac Caafimaad Oo Laga Muujiyey Soomaalida UK Ku Nool Oo Cudurka HIV/AIDS Ku Faro Baas Ku Hayo Iyo Dawladda Ingiriiska Oo Warbixin Ka Soo Saartay Next Post“Komishankani Waa Kii Ugu Ayaanka Darnaa, Sababtu Waa Awooddii Madax-weynaha Ayaa Innaga Maqan, Waad Ogaydeen Daahir Rayaale Markii Xisbigiisu Diiday Intuu Istaagay Oo Yidhi Waa La Innaga Helay Waynu Aqbalaynaa Marka Power-Kii Maqan Yahay Waa Dhib, Waar Umadda Yaan La Kala Kaxayn”.....Sheekh Aadan Siiro